यस्तो छ –सुरक्षा सूचना बेचेर राजनले किनेको ३ करोडको घर – SamajKhabar.com
यस्तो छ –सुरक्षा सूचना बेचेर राजनले किनेको ३ करोडको घर
संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: १८ मंसिर २०७४, सोमबार १६:४२
काठमाडौं क्षेत्र नं ४का उम्मेदवार राजन भट्टराईलेदेशेकोमहत्वपूर्ण सूचना बेचेर ललितपुरको धापाखेलमा आलिसान महल किनेको खुलासा भएको छ । आँफू काठमाडौं ४को बासिन्दा भएको दाबी गर्दै आएका राजन त्यहाँबाट बसाई सरेर ललितपुर धापाखेलमा सिभिल होमले बनाएको क्लोनीमा बसोबास गरिरहेका छन् ।
सिभिल होमको ललितपुर धापाखेलमा रहेको कोलनी राजन भट्टराईको हो ।
भारतीय दुतावासको कोटामा जहावरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गरेका भट्टराईले भारत लगायतका मुलुकमा सूचना बेच्ने धन्दा गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौ महानगरपालिका वडा नं ७ बुलबुलेमा बस्दै आएका भट्टराई ललितपुरको सिभिल होममा घर किनेपछि उतै सरेका थिए ।
भट्टराइकी श्रीमति र बालबच्चा अहिले पनि धापाखेलमै बस्छन् ।
सांसद हुँदासम्म विकासका काममा कुनै चासो नदिएका राजनले अहिले चुनाबी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धी सांसदलेकाम नगरेको आलोचना गर्दै आएका छन् । निर्माणाधिन चावहिलको सडकले गिज्याइरहेको बताउँदै आएका राजन आँफू भने उच्च व्यवसायिक घरानाहरु बस्नेसिभिल होमको आलिसान महलमा बस्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनको छवी उदांगो भएको छ ।
उनले यो घर खरिद गर्न पैसा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना गम्भीर सूचना विदेशी निकायलाई बेचेर कमाएका हुन् । ती बाहेक घर किन्ने समयमा यी भारतीय दुतावास र मेडिकल माफियासँग समेत राम्रै सहयोग लिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
भट्टराई अध्यक्ष रहेको नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठान (निप्स) नामका संस्था खोलेर सुरक्षासम्बद्ध नीतिमा चलखेल गर्दै आएका छन् । एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको बेला परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका भट्टराई अध्यक्ष रहेको निप्सले नेपालको कार्यकालमा उनकै प्रभावमा विभिन्न परियोजना ल्याएर दर्जनौं कार्यक्रम गरेको कान्तिपुरका तत्कालिन पत्रकार सरोजराज अधिकारीद्धारा लिखित पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ ।
निप्सले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सम्बन्धि परियोजनाका लागि तीन करोड ४२ लाख ६१ हजार नौ सय ५० रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेको थियो
राज्यको महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई सहभागी गराएर कार्यक्रम हुने गरेकाले राष्ट्रिय सुरक्षामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने यस्ता गतिविधि नियमन गर्न कठिनाई भइरहेको भन्दै गृह मन्त्रालयका अधिकारीले समेत चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ती अधिकारीले राजनले गरेको कुकृत्यमा तत्काल मुद्दा चलाउँनुपर्ने अवस्था देखिएपनि राजनीतिक आवरणका कारण केही गर्न नसकिएको भन्दै निरिहता प्रकट गरे ।
गृह मन्त्रालय र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको छानविनको दायरामा आएको ३४ करोड रुपैयाँ बराबर निम्स सहितका अन्य संस्थको परियोजना सामरिकका साथै आर्थिक हिसाबले पनि निकै विवादित बनेको थियो ।
त्यतीबेलाका केही प्रतिष्ठीत संचार माध्यमहरुले पनि विदेश मामिला सल्लाहकार भट्टराईले पदिय जिम्मेबारीको दुरुपयोग गरेर संवेदनशील सुचना विदेशीलाई चुहाएको समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका थिए । सो विषयमा बिबिसी नेपाली सेवाले समेत प्रश्न गर्दा भट्टराई नाजवाफ भएका थिए । एमालेका नेता भट्टराईले महिनामा दुई पटक लैनचौरस्थित भारतीय राजदूतावासबाट पनि तलव बुझ्ने गरेको एमालेका नेताहरूकै आरोप छ । भारतीय दूतावास उच्च स्रोतले पनि भट्टराई बेलाबेला दूतावासमा आउने गरेको स्विकारेको छ । सो
डा भट्टराई भारतीय दूतावासको सहयोगमा नयाँदिल्लीस्थित जहवारलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा एस.डी. मुनी र महेन्द्र पी. लामाको विद्यार्थी भएर अध्ययन गरेका हुन् । उनैले अहिले आफुलाई भारतको कट्टर विरोधी र असली राष्ट्रवादी भनाउने गरेका छन् । नेपाल–भारत बौद्धिक समूहका सदस्य समेत रहेका एमालेका नेता भट्टराईले सो समितिका सदस्य एवम् भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोशिहारी र प्रध्यापक महेन्द्र पी. लाम्पासँग ठाडो नजर गरेर हेर्न समेत सक्दैनन् । आफ्ना गुरुद्धय मुनी र लाम्पाको जुनसुकै प्रस्तावलाई अस्विकार गर्न नसक्ने भएकाले भट्टराईको उपस्थीति समितिमा नाम मात्रको भएको एक सदस्यले बताएका छन् ।
१८ मंसिर २०७४, सोमबार १६:४२ मा प्रकाशित
सूर्यको आरधना गरी छठपर्व मनाइँदै
सइसम्मको सरुवाको जिम्मा अव प्रदेशलाई
२६ वर्षपछि बल्ल बल्यो बिजुली !